फुटबल जगत लयमा फर्कन कति समय लाग्ला ? « epurwa
फुटबल जगत लयमा फर्कन कति समय लाग्ला ?
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७७, शनिबार १६:१४
सञ्जिव मिश्र (फुटबल विश्लेषक)
विश्‍वभर कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएको छ । यस्तोमा विश्‍वभरको फुटबल गतिविधि ठप्प छ । नेपाली फुटबलले पनि समान अवस्था भोगिरहेको छ । ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिग स्थगित गरिएको छ । एन्फा क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । समग्र फुटबलमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र यसको दूरगामी असरबारे नेपाली र विश्‍व फुटबललाई नजिकबाट नियालिरहेका फुटबल विश्लेषक सञ्‍जीव मिश्रको विश्लेषण :
कोरोनाको विश्‍वब्यापी महामारीका कारण नेपालको मात्रै नभएर विश्‍वको फुटबल प्रभावित भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबललाई अघि बढाउनेबारेमा यससम्बद्ध संस्थाहरुले निर्णय लिन छलफल थालिरहेका छन्। तर घरेलु फुटबलबारेमा जुनसुकै देशमा आ-आफ्नो अनुकूलता हेरेर काम गरिरहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा ‘सी’ डिभिजन २८ चैतबाट हुने कार्यतालिका थियो। ‘बी’ डिभिजन ३२ वटा खेल भएपछि रोकियो। अब हामी आशा गरौं : चाँडो भन्दा चाँडो कोरोना महामारी हटेर अवस्था सामान्य होस् र यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकौं। त्यसपछि थप विचार गर्न सकिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा सरकार, खेलकुद परिषदको निर्णयलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। एन्फाले सोही अनुसार नै निर्णय लिएको छ। अब अवस्था सामान्य भएपछि खेलहरुका लागि एकदमै सीमित मितिहरु हुनेछन्। अवस्था सामान्य भएपछि ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनले आर्टिफिसियल टर्पमा खेलाएकाले मौसमले धेरै प्रभावित नपार्ला।
तर मूख्य समस्या भनेको एउटै क्लबले एउटै सिजनमा दुईवटा प्रतियोगिता खेल्न अलिक गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले एन्फाले निर्णय लिँदा सरोकारवालासँग बसेर के गर्दा फुटबलको हित हुन्छ। भनेरनै निर्णय लिनु उचित हुन्छ। अब यो अवस्थामा नेपाली फुटबल मात्र होइन, सबै ब्यवसायमा रहेकाहरुले भोलिको दिनमा पनि निरन्तरता दिन फरक तरिकाले सोच्ने समय आएको छ।
घरमा नै रहँदा खेलाडीले भोलि पनि खेल्नुपर्छ भनेर फिटनेसमा रहनु पर्छ। घरमा बस्दा आफ्नो तयारीलाई कायम राख्नु पर्छ। नत्र भने दुई महिना, तीन महिनापछिबाट फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने मुस्किल पर्छ। अहिले फुटबलमा खेलाडी, प्रशिक्षकलगायत सबै सरोकारवाला निकायमा जागरुकता जरुरी छ। घरमै रहँदा फिटनेश कायम गर्नुपर्छ नभए घरेलु लिगदेखि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म हामीलाई असर गर्न सक्छ। नेपालको विश्‍वकप छनोट बाँकी छ।
महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुने भएकाले खेलाडीका लागि यो समय एकदमै महत्वपुर्ण छ। आफूमा इमान्दारीता र अनुशासन नभए केही खेलाडीको करिअरनै संकटमा पार्न सक्छ। त्यसैले फिटनेशमा ध्यान नदिने हो भने फुटबल करिअर नै धरापमा पर्ने खतरालाई खेलाडीले मध्यनजर गरेर आफूलाई फिट राख्‍न सचेत रहनु पर्छ। यो अवस्था खेलाडीका लागि केही समय मात्र होइन, सिंगो करिअरसँग जोडिएर आउने छ।
अहिले विश्‍व फुटबलको कुरा गर्दा फिफाले नै धेरै सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ। केही ठाउँमा क्लब फ्रेन्ड्ली र बेलारुसमा फुटबल लिग भइरहेको छ। त्यो बाहेक अन्यत्र फुटबल स्थगित छ। यो सबै गतविधि हेर्दा २०२२ को विश्‍वकप पहिलो पटक डिसेम्बरमा छ।
विश्‍वकपमा सर्वाधिक बढी प्रतिनिधित्व गर्ने युरोप नै हो। युरोप अहिले सर्वाधिक प्रभावित छ। आगामी वर्ष युरो हुँदैछ। फुटबलमात्रै यस्तो खेल हो, जहाँ छनोट हुन होम एण्ड अवे भनेर दुई खेल खेल्नु पर्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा युरोप र अमेरिकालाई सामान्य अवस्थामा फर्किन ५/६ महिना लाग्छ। त्यसपछि पनि विभिन्‍न देशका आफ्नै नियम हुन्छ।
कुन देशका खेलाडीलाई भित्राउने नभित्राउने, कोरोना प्रभावित देशका लागि के गर्ने भन्‍ने हुँदा छनोट गराउन निकै गाह्रो हुने पक्का छ। अर्को कुरा फिफाले आफ्नो बैठकहरु गर्न सकिरहेको छैन। यस्तोमा होममा र अवेमा हानेको गोलले नै टिमको छनोट तय हुने हुन्छ। त्यसैले धेरै कन्फ्युजनहरु सतहमा आएका छन्। त्यसैले नियम नै परिर्वतन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
जसले गर्दा भोलिका दिनमा २०२२ को विश्‍वकपलाई पनि कठीन मोडमा पुर्‍याएको छ। विभिन्‍न देशको घरेलु प्रतियोगिताहरु स्थगित छन्। फिफाले स्पष्ट रुपमा पहिले मानिसको स्वास्थ्य भनेको छ। मानिस भएमात्रै फुटबल हुने उसको स्पष्ट धारणा छ। तर उसले कुनै पनि देशलाई तिमीहरुको लिग गर या नगर भनेको छैन। यदि फिफाले निर्देशन दिएको हुन्थ्यो भने बेलारुसमा यस्तो महामारीका बेला लिग हुने सम्भावना नै रहने थिएन।
बेल्जियममा एक खेल बाँकी थियो। त्यहाँ एक अंक बढी हुने टिमलाई विजेता बनाइयो। अब त्यो अबस्था आउन पनि सबै टिमले बराबरी खेल खेल्या हुनु पर्यो। कतिपय देशमा त्यो अवस्था पनि छैन। कतिपय देशमा लिगको आफ्नो नियम हुन्छ। कसैले पनि सोचेको थिएन कि यस्तो होला र लिग रोक्नु पर्ला भनेर। तर अब भोलिको दिनमा विशेष कारण सिर्जना भएमा भनेर क्लज राख्नु पर्ने अवस्था आएको छ। अब अन्तिम केही खेल बाँकी रहेका देशहरुले एउटा निर्णय गर्ला।
चर्चित लिगहरुलाई निर्णय गर्न सहज हुने छैन। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुलकै कुरा गर्दा गणतीय रुपमा उपाधिले जितेको छैन। लिभरपुलले सबै हार्नु र अर्कोले सबै जित्ने गणतीय सम्भावना बाँकी छ। इंग्लिस प्रिमियर लिगको ठूलो लगानि छ। लिग क्लबहरुमा इंग्ल्यान्डको मात्रै लगानी पनि छैन।
विश्‍वभरका मान्छेको लगानी भएकाले निर्णय लिन सहज हुने छैन। त्यसैले सबै क्लबहरुलाई राखेर त्यहाँको फुटबल संघले एउटा निर्णय गर्ला तर एक्लैले निर्णय गर्छ भन्‍ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले सबै असामान्य अवस्थाहरुलाई समेटेर अघि जान स्वभाविक रुपमा समय लाग्‍ने छ।